စိတ်ကြည်လင်သွားစေမည့် စက္ကန့် ၆၀ လေ့ကျင့်ခန်း – Healthy Life Journal
စိတ်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေတာတွေ များနေပါသလား . . .
သက်ပြင်းကို အခါခါ ချမိနေပါသလား . . .
ဒီလိုဖိစီးမှုများတာကြောင့် ပိုပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ဘဲ တစ်မိနစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာ စိတ်အပန်းပြေသွားစေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းငါးသွယ်ကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
(၁) မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်ပြီး ၆၀ မှ နောက်ပြန်ရေတွက်ခြင်း
အပေါ်ကိုမော့ပြီး ငေးကြည့်တာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ Parasympathetic Nervous System ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့် သွေးဖိအားလျော့ကျကာ အသက်ရှူနှုန်းပိုကောင်းသွားပါတယ်။ ၆၀- ၅၉-၅၈ စတာကနေ တစ်အထိ နောက်ပြန်ရေတွက်သွားတာက စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတာတွေကို လွင့်ပြယ်သွားစေပါတယ်။
(၂) မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ သင့်ပူပင်သောကများ ချရေးခြင်း
စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ သင်ပူပင်သောကရောက်ရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ချရေးလိုက်တာက စိတ်ပေါ့ပါးသွားစေတဲ့အပြင် ဘာကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်း အကြံဉာဏ်ရောက်စေပါတယ်။
(၃) နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် ၁၀ ကြိမ် အသက်ရှူခြင်း
အသက်ဝ၀ရှူသွင်းတာက နှလုံးခုန်နှုန်းကို နှေးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။ အသက်ရှူသွင်းနေစဉ်မှာ သင့်ရင်ဘတ်က ဖောင်းလာလိုက်၊ ပြန်ကျသွားလိုက်ဖြစ်တာကို အာရုံစိုက်နေတာက အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းပြီး စိတ်ညစ်နေတာတွေ လွင့်ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
(၄) တိမ်များမျောလွင့်နေသည်ဟု စိတ်ထဲခံစားကြည့်ခြင်း
နေ့စဉ် ပူပင်သောကနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ ယာယီလွတ်မြောက်သွားစေဖို့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ကောင်းကင်မှာ တိမ်စိုင်တိမ်လိပ်တွေ ရွေ ့လျားနေတယ်လို့ ခံစားကြည့်လိုက်ရင် စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
(၅) ခေါင်းမှခြေဖျားအထိ ကြွက်သားများကို ဖြေလျှော့ပေးခြင်
ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ပေးတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပြေလျော့သွားစေပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ နာကျင်မှုနဲ့ သက်သောင့်သက်သာမရှိမှုတို့ လျော့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
Related Items:Exercise, healthy life style, Mental Healthy